fanontaniana Hi ....
1 taona 8 volana lasa izay #697 by PAYSON
Izany dia midika hoe efa hatramin'ny ela loatra aho no nitsidika ny forum. Miarahaba ny rehetra mpikambana vaovao. Vao nahita ary lasa mpikamban 'ny BEST toerana izany tsara fanahy. Tsy diso ianao nanao tamin'ny fanaovana izany, dia nahazo toerana tsara tarehy sy ny 50 fiaramanidina, tanteraka soa aman-tsara rehetra. Fantatro fa rehefa tonga any amin'ny toerana mitsoka izao saina izao, tsy matoky foana. Fantatrao .... (raha toa tsara loatra, izany angamba no). Tsy eto izy .... dia toy 12 na 13 taona tany amin'ny biz sy 0 olana. Geeeez ... dia feo toy ny frickin ny mpivarotra. I miantoka anao, tsy aho. Nefa ihany, handray ho mpikambana vaovao ianao.
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: Yustinzz
1 taona 8 volana lasa izay #701 by Derrick1224
Vao avy naka P3D V4 sy ity tranonkala ity dia mpamonjy aina. Manana zavatra mandra-manidina manam-bola ny toe-panahy mahatoky avo payware hametraka eo.
Fotoana mamorona pejy: 0.245 segondra